भारत-चीनबीच पुनः ‘वाक यु,द्ध सुरु’ तनावमा मोदी !:: Mero Desh
भारत-चीनबीच पुनः ‘वाक यु,द्ध सुरु’ तनावमा मोदी !
Published on: ३० आश्विन २०७८, शनिबार १३:१७
“काठमाडौं । भारतीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायुडूको अरुणाचल प्रदेशको भ्रमणले बेइजिङ र नयाँ दिल्लीबीच पुनः ‘वाक युद्ध’ भएको छ ।चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भारतीय उपराष्ट्रपति नायुडूको भ्रमणप्रति आपत्ति जनाएपछि भार तीय विदेशमन्त्रा लयले त्यसको जवाफ फर्काए को हो ।
“चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जाओ लिजियानले भने, चीन अवैध रुपमा गठन गरिएको अरुणचाल प्रदेशलाई मान्यता दिँदैन र भारतका उपराष्ट्रपति वेंकैया नायुडूको त्यसको क्षेत्रमा गरेको भ्रमणको सशक्त रुपमा विरोध गर्दछ ।
“भारतको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, हामीले चीनका आधि कारिक प्रवक्ताले आज गरेको टिप्पणी देखेका छौं । हामी त्यस्तो टिप्पणीलाई अस्वीकार गर्दछौं ।
“अरुणाचल प्रदेश भारतको एउटा अभिन्न र अभिभाज्य अंश हो । भारतको विदेश मन्त्राल यले अन्य राज्य जस्तै भारतको कुनैपनि नेताले अरुणाचल प्रदेशको भ्रमण गर्नसक्ने जनाएको छ।
“भारतीय नेताहरुले भारतकै एक राज्यको भ्रम ण गर्दा अपत्ति जनाउनु भारतीय नागरिकको तर्क र सुझबुझभन्दा निकै टाढा को विषय होु भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ ।
“चीनले अरुणाचल प्रदेशमा भारतीय अधिकारी हरुको भ्रम णको विरोध गरेको पहिलोपटक भने होइन । यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसम्मले अरु णाचल प्रदेशको भ्रमण गर्दा चिनियाँ विदेश मन्त्रा लयले औपचा रिक रुपमा विरोध गर्ने गरेको छ ।
“चीनले अरुणाचल प्रदेश आफ्नो भएको दाबी गर्ने गरेको छ । बेइजिङले त्यसलाई दक्षिण तिब्बतु भन्छ । सन् १९१४ मा औ पनिवेशिक अंग्रेज सरकार, तिब्बतबीच भएको सीमा सम्झौ तालाई बेइजिङले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
“सिमलामा भएको सम्झौताले दुवै क्षेत्रको सीमा निर्धारण म्याकमोहन लाइनबाट गर्न ल्हासा राजी हुन्छ । तर बेइजिङका प्रतिनिधि भने सम्झौता को विरोध गरेको बैठक छाडेर हिँडेका थिए ।
“तर बेइजिङले म्याकमोहन लाइनलाई मान्यता दिएको छैन । सन् १९३५ पछि त्यो पुरै भूभाग भारतको मानचित्रमा आएको हो ।
“चीन सरकारको औपचारिक नक्सामा अरुणा चल प्रदेश भूभागहरुलाई समावेश गरिएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले भने अरुणाचल प्रदेश माथि भारतको सम्प्रभूतालाई स्वीकार गर्दै आएको छ ।
“भारत र चीनबीच सीमा विवादको महत्त्वपूर्ण विषयको रुपमा रहँदै आएको छ । चीनले विवादास्पद भूभाग भन्दै आएको अरुणाचल प्रदेशमा भारतीय अधिकारीहरुको भ्रमणमा आपत्ति मात्रै जनाउँदै सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकाहरुलाई चीन भ्रमण गर्दा
“र भारत सरकारतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै चीन जाने खेलाडी देखि सरकारी अधिकारीहरुलाई भारतीय पासपोर्टमा भिसा समेत दिने गरेको छैन । बेइजिङले कस्मिरका मानिसलाई जस्तै अरुणाचल प्रदेशमा बसोबास गर्नेहरुलाई फरक कागजातमा भिसा दिन्छ ।
“बेइजिङ अरुणाचल प्रदेशका नागरिकलाई राखेको वार्ता टो लीमा समेत सहभागी हुने गरे को छैन । सन् १९६२ को भारत चीन युद्ध पनि अरुणाचलको प्रदेशको सीमा विवादकै कारण भएको थियो ।
“चीनले त्यस समयमा आफूले दावी गर्दै आएको इलाका कब्जा गरेपनि चीनले पछि सो स्थानबाट फिर्ता भएको थियो । सीमा विवाद सुल्झाउने विषयमा दुवै देशबीच पटक पटक वार्ता भए पछि समाधान निस्कन सकेको छैन ।
“पछिल्लो समयमा चीन र भारतबीच लद्दाख क्षेत्रमा सीमा विवाद भएको थियो । एक वर्ष अघि सीमा क्षेत्रमा भएको झपडमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो केही चिनियाँ सैनि कहरुको हताहति भएको थियो । अरुणाचल र लद्दाख क्षेत्रको सीमा विवाद फरक प्रकार हो ।
अमेरिकाबाट आयो नसोचेको खबर ! सारा बिश्व त’नावमा
अमेरिकामा पहिलो पटक नेपाली मूलकी यि युवती सांसद बन्दै
बिश्वकपको लागी ५ महिना कामदारले कतार छोड्नुपर्ने, कतारले ५ महिनाको तलब दिने !
सरोगेसीबाट जुम्ल्याहा बच्चाकी आमा बनिन् प्रीति
नेपाली श्रमिकका लागि बहराइन खुला, खो,प ल,गाएकाहरू क्व,रेण्टीनमा ब,स्न नपर्ने !
छोरीलाई अँगालोमा बेरेर बचाए बाबुले, आफू भने बाँचेनन…
मुकुन्दे सँग विवहा गर्ने महिला को हुन? थाहाँ पाउनुस्
‘गोैतमबुद्ध रङ्गशाला (धुर्मु‘सलाई) सरकारले स‘हयोग गर्ने भयो।
खु‘सिको खबर: नेपालमा वि‘द्युतीय सवारी कारखाना खोल्न चीन इ‘च्छुक।
बिनित इन्द्रेणीमा सबैले हेरेर शे‘यर गर्नै पर्ने भिडियो
‘मलाई अर्काको पो‘ई लास्टै मन पर्छ: मोडल लक्ष्मी( भिडियो सहित)